Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Dhaqan Galiyay Cunaqabataynta Dalka Iiran.
Maraykanka oo Dhaqan Galiyay Cunaqabataynta Dalka Iiran.
Shalay oo ku beegnayd 5ta bisha November ayey dowlada Maraykanka bilowday dhaqan-gelinta cunaqabateynta dhaqaale oo ay kusoo rogeen wadanka Iran.
Cunaqabateyntan oo daba-socota burburintii Maraykanka ku sameeyey heshiiskii Nukliyeerka Iran ee la saxiixay 2015, heshiiskaasi oo ay weli taageersan yihiin Beesha Caalamka iyo Qaramada Midoobay. Maraykanka ayaa kaligiis go’aansaday in uu ka baxo heshiiskaasi oo ay qeyb ka ahayd qaadista cunaqabateynta dhaqaale ee saaran xukuumada Tehran.
Dalalka Sacuudiga, Imaaraatiga iyo Israel oo xidhiidh fiican la leh Xukuumada Trump ayaa muddo dheer olole ugu jiray burburintii heshiiskii lala galay Iran, isla markaana si weyn u taageersan cunaqabateyntan.